चेलीबेटी बेचबिखनमा आफन्तकै हात – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
काठमाडौं । अवरुद्ध घाँटी अनि आँखामा टिलपिल आँसु। नुवाकोटकी २१ वर्षीय रानू मगर ९नाम परिवर्तन० लाई पीडा पोख्न गाह्रो भइरहेको थियो। भारतको कोठीमा ६ वर्ष बिताएको त्यो क्षण बयान गर्न उनी ठूलो हिम्मत जुटाउँदै थिइन्। मुखबाट शब्द फुट्न नपाउँदै रानू भक्कानिन्थिन्। अनि घरिघरि भनिरहन्थिन्, ‘मैले जस्तो पीडा कुनै चेलीले भोग्न नपरोस्।’
केही महिनाअघि माइती नेपालले रानूलाई उद्धार गरी नेपाल फर्काएको छ। कोठीबाट फिर्ता भए पनि उनलाई समाजको सामना गर्न सजिलो छैन। चरित्रप्रति आंैला ठड्याउने चिन्ता छ उनलाई। समाजले लगाउने लान्छना कोठीमा बिताएको रातभन्दा पनि भयानक ठान्छिन् उनी। उनी सुनाउँछिन्, ‘आफन्त भनेर विश्वास गर्न नहुने रहेछ। आफ्नैले भारतको कोठीसम्म पुगें।’ नेपाल आइपुग्दा उनले नेपाली भाषा नै बोल्न सकेकी थिइनन्। उनैको उजुरीको आधारमा डेढ महिनाअघि उनका काका र काकी कारबाहीमा परिसके।
महिला तथा बालबालिका यौनशोषण, यौन उत्पीडन तथा बेचबिखनको मारमा बढी पर्ने गरेको राष्ट्रसंघले अध्ययन गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी ग्लोबल प्रतिवेदन २०१८ ले जनाएको छ। अध्ययनले ३५ प्रतिशत महिला तथा बालिका मानव बेचबिखन तथा यौन शोषणमा परेको तथ्यांक छ।
पछिल्लो समय आन्तरिक बेचबिखन बढेको छ। द फ्रिडम फन्डले २०१८ मा गरेको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकामा मनोरञ्जन व्यवसायमा करिब १७ सय बालबालिका कार्यरत छन्।
कोरिया र चीनमा नेपालसहित भियतनाम, क्याम्बोडिया, फिलिपिन्सजस्ता देशबाट विवाहका बहानामा महिलालाई लगेर दाससरह राखिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाका प्रतिवेदनले देखाएका छन्। विवाहको बहानामा महिलालाई विदेश पठाउने प्रवृत्ति मानव बेचबिखनकै अर्को स्वरूप हो। धेरै व्यक्ति यौन शोषण र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचिन्छन्। भिखारी, जबरजस्ती, विवाह, अश्लील सामग्रीको उत्पादन, शारीरिक अंग झिक्नसमेत पीडितलाई बेचिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष नेपालका अनुमानित ३५ हजार मानिस बेचबिखनमा परेका थिए। तीमध्ये १२ हजार वैदेशिक रोजगारी, ७ हजार वयस्क मनोरञ्जन र ३ हजार बाल श्रमका लागि बेचबिखनमा परेका छन्। पछिल्लो तीन वर्षमा मानव बेचबिखनको तथ्यांक पनि बढ्दो क्रममा छ। आव २०७४र७५ मा मानव बेचबिखन अपराध ब्यूरोमा ३ सय ५ र ०७५र७६ मा २ सय ५८ मुद्दा दर्ता भएका छन्। अन्नपूर्णबाट
सङ्गीतबाट पनि निको पार्न सकिन्छ धेरै रोग
नक्कली जग्गाधनी खडागरी ३२ बिगाह जग्गा हिनामिना गर्ने सहसचिवसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
अवैध मिर्गौला प्रत्यारोपणस् चिकित्सक, प्रहरी, वडाध्यक्ष लगायतको संलग्नता २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
युवा अभियान्ता सरोजको नेतृत्वमा ६० दिने अभियान: सहिद स्मृती बहुमुखी क्याम्पस परिसरमा सरसफाइ तथा बृक्षारोपण २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
गृहजिल्ला चितवनबाट प्रचण्डले भने : हामीले मिलेर नयाँ नक्सा बनाएको हो, कोही दलाल‍ र कोही महान् राष्ट्रवादी होइन! २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
मृगौला किनबेचको अबैध धन्दामा लाखौं रुपैयाँको चलखेल : प्रहरीले गर्यो डाक्टर र जनप्रतिनिधिसहित १२ जनाको नाम सार्वजनिक ! २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
गृह जिल्लामा ब्यस्त प्रचण्ड आज दिनभर पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा । २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
मृगौला प्रत्यारोपणमा कुनैअवैधानिक र गैरकानुनी काम नगरेको कलेज अफ मेडिकल साईन्सेजको दाबी । २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
पत्रकार अधिकारीले दिए बिहेको भोज गर्ने रकम कोराना कोषमा २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
डेरावालले भाडा नदिँदा कोठाभाडाबाट जीविका चलाउँनेलाई जीविका चलाउन समस्या ! २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
बाढीपहिरोबाट मर्नेको सख्ँया ८८, ३२ बेपत्ता २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२
श्रावण र भाद्र दुई महिना बाढी पहिरोको समस्या’ २६ पुस २०७६, शनिबार ०३:२२